kuyedza mu devops nyika
Kuru Agile Kuedzwa muDevOps Nyika
DevOps mubatanidzwa weKuvandudza uye Mashandiro maitiro eSoftware budiriro uye Dhirivhari.
Vanoedza avo vanobatanidzwa muDevOps modhi yekuendesa vanotanga kubvunza mibvunzo yakaita seiyi:
Ndekupi kuyedzwa kunokodzera mune yeDevOps modhi?
Kuyedza uye QA muDevOps kwakasiyana papi nekuyedzwa muAgile uye mapopoma emhando?
SeQA, ndedzipi hunyanzvi hwekuwedzera hwandinotarisirwa kuziva?
Iyi posvo inokurukura maturusi, mazano, uye maitiro atinoda kuti tiite kuyedza zvinobudirira muDevOps nyika, kukumbundira otomatiki uye kuenderera kuyedza muDevOps.
QA uye Kuedza muDevOps
Kuedza kwakashanduka sei kubva pamvura zhinji kuenda kuchisimba kuDevOps?
Kwayedza uye yeQuality Assurance maitiro akaona shanduko yakakura kubva pamazuva eiyo mapopoma, Agile uye ikozvino DevOps. Mune yemvura mapopoma, kuyedzwa kwakaonekwa sechikamu mune software yekuvandudza lifecycle. Vanoedza uye kuyedza kuyedza kwakanyatso sileswa uko vaedzo vaimbove chikamu cheboka rekuyedza uye kazhinji vachiparadzaniswa neboka rekuvandudza.
VaTester vaiva neiyo yekuyedza zano uye vaionekwa sevarindi vemikova vemhando yepamusoro. Kuedzwa kwainyanya kuve kwemanyorerwo uye kwaishandiswa kuitika mushure mekunge software yagadzirwa zvizere uye nguva pfupi isati yatanga kuburitswa mukugadzirwa.
Saizvozvo, software yaitora nguva yakareba kuendesa. Rimwe rakasiyana boka revashandi raive nebasa rekuburitsa software kuti igadzire iyo, pazvakanakisa, yaiitika yega yega mwedzi mishoma. Paive pasina kana yakaderera nhanho yekutaurirana / kubatana pakati peboka reOps nechikwata cheDev.
Agile modhi yakagadzira shanduko mukuvandudza uye kuyedza nzvimbo pamwe neyakaregedzwa frequency. Software yakagadziridzwa iteratively uye kuwedzera. Scrum, inova nzira iri muiyo Agile dhirivhari modhi, yakakurumidza kuve yakakurumbira.
Kubudirira kuyedza kwakaputswa kuita rondedzero yemapfupi iterations, kazhinji anogara 2-4 mavhiki. Imwe iteration yaizogadzira inogona kutakurika software nekuwedzera nyowani kana kusimudzira zviripo maficha.
Vanoedza vakave chikamu cheboka rekuvandudza uye kuyedza kwakava chiitiko chakafanana kune software yekuvandudza, pane chikamu pamagumo eSDLC. Chiitiko chekuyedza chakave chekugovana mutoro uye mhando yaive yeiyo timu yekusimudzira.
Iyo Agile modhi yakasanganisa iyo yekuvandudza uye yekuyedza maitiro uye yakagadzira nzira yekumhanyisa kuendesa software, zvisinei, iko chaiko kutumirwa mukugadzirwa kwaive kuchiri kuitwa neimwe yakaparadzana TechOps timu.
Nepo timu yeTechOps yaizove neruzivo rwemaserver, maratidziro, uye kutumirwa, vaiwanzo ziva kune ruzivo rwekuburitswa kwega kwega. Mhinduro kune timu yekusimudzira yainonoka. Kana bhagi raivepo mukuburitswa, zvaizotora maawa mashoma kuti timu yekusimudzira izive nezvenyaya iyi.
DevOps inotora iyo Agile modhi nhanho inowedzera nekuunza padyo kusunungurwa uye kuendesa zviitiko kune izvo zvekuvandudza uye kuyedza. Izvi zvinoreva kuti timu inononoka pachayo inobata kuvandudza, kuyedza uye kuburitsa software yavanogadzira.
DevOps Yekuyedza Sarudzo
Kwayedza muDevOps inotenderera iyo yese software kuvandudza uye kuendesa hupenyu hwehupenyu. Miedzo haichisiri kungo tarisa pane kuyedza kushanda uye kuongorora kwehunhu.
Sevanoyedza, isu tinofanirwa zvakare kuve nechekuita mukuyedza mashandiro, kuyedza mashandiro, kuyedza kwekuchengetedza kwekutanga, pamwe nekugona kuongorora uye kuongorora data rekugadzira nematanda.
Dan Ashby ane yakanakisa post nezve kuyedzwa muDevOps maanotsanangura
Iwe unogona kuona kuti sei vanhu vachinetseka kuti vanzwisise kuti kuyedzwa kunokodzera kupi mumodeli isingataure nezvayo zvachose. Kwandiri, kuyedza kunoenderana pane imwe neimwe poindi imwe mune iyi modhi.
Chokwadi, kuyedza kunogona uye kunofanirwa kuitika padanho rega rega mune yeDevOps modhi. Mu Agile Kwayedza Strategic post , isu takatsanangura kuyedzwa kunokwana sei mumuenzaniso weAgile.
DevOps yekuyedza zano inogona kuwedzera izvozvo nekuwedzera anotevera zvikamu:
Kwayedza Automation uye Kuenderera Kwayedza muDevOps
Sarudzo yezvishandiso uye matekinoroji anova anonyanya kukosha mumhando yeDevOps. Sarudzo yemidziyo inobvumidza kugona kwesangano kuendesa kunyorera uye masevhisi pakakwirira velocity.
Iko kune kusimbisa kukuru pakuongorora otomatiki muDevOps sezvo isu tichida kugadzira tsika kwatinogona kusundira kodhi pasi pasi masisitimu nekukurumidza uye nechivimbo.
Zvakare pamwe nemashandiro eemuchina anoshanda, isu tinofanirwa zvakare kuve neyakagadziriswa bvunzo bvunzo pamwe nekuchengetedza / kusimba bvunzo mupombi yekuendesa.
Pasina mubvunzo kutaura, usati wakwanisa kuita chero eemhando yepamusoro zviyedzo, chekutanga uye chikuru ndechekuvaka otomatiki kuvaka uye kuendesa pombi mune Inoenderera Yekubatanidza chishandiso, senge Jenkins.
Kuedzwa mukugadzira hazvireve kuti kuitisa ako anoshanda / ekuyedza ekunyora zvinyorwa zvichipesana neiyo live system uko vashandisi vari kushandisa iko kunyorera.
Tinogona kutanga nekuongorora zvinoitika muA / B kana multivariant bvunzo. Isu tinogona zvakare kutarisa maseva ehunhu chero husina kujairika, senge ndangariro dzinodonha, yakakwira CPU kushandiswa, nezvimwe.
Mhedzisiro yeDevOps paKuyedza
Izvi zvese zvachinja sei basa revanoedza uye kuyedza muDevOps?
Vanoedza ikozvino vanotarisirwa kuve neruzivo kana hunyanzvi hunotevera kuti vakwanise kuita zviitiko zvekuyedza
Ruzivo rwekutanga network
Basic Unix / Shell kunyora, i.e. bash, python
Kuenderera mberi Kubatanidzwa / Kuenderera Dhirivhari eg. Jenkins,
Performance maturusi ekuyedza senge JMeter kana Gatling
Yakagadzirira Kushanda uye Kutsigira Kuedzwa
Kuziva kwemidziyo, Docker, Kubernetes
Kutsvaga maturusi ekutarisa akadai seSplunk
Clouds masevhisi, i.e. AWS, Azure
Hupenyu hwebhatiri samsung galaxy s5
akanakisa screen muchengeti we galaxy s9
Apple Watch 7 specs uye maficha akasungirirwa: nyowani kuratidza uye processor, pasina shuga yeropa yekutarisa
T-Nhare kuenda pamudyandigere Wi-Fi Kufona pane yakasarudzwa zvishandiso inouya Chivabvu 31
Samsung & apos; s Gear Fit2 Pro 'fitness smartwatch' iri kutengeswa pamupengo wepasi $ 80 ($ 120 yabviswa)
Ndege modhi inogona kuwana yakangwara mu = Android 11
Cyber ​​Muvhuro uye Kudonha 2018 madhiri: Apple, Samsung, Google, Walmart, Costco, nezvimwe
10 matipi uye madiki ekuvandudza zvakanyanya hupenyu hwebhatiri pane yako iPhone 7 kana iPhone 7 Plus
Kudonha 4 Pip-Mukomana shamwari app yave kuwanikwa yeApple uye Android zvishandiso